Yenza iPinterest Graphics yeBrand yakho eme ngaphandle | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Esinye sezixhobo ezibonakalayo ezibonakalayo esinazo namhlanje kwi-intanethi yile Pinterest. Sinokuchitha iiyure sikhangela le nethiwekhi yokujonga imifanekiso esikhuthazayo okanye esebenza njengesalathiso seprojekthi. Kodwa inye into abayili begraphic, iibhlog, kunye nabathengisi abaziyo yile IPinterest ingaphezulu kwebhodi apho ugcina khona imifanekiso oyithandayo.
Iivenkile ezikwi-Intanethi, iibhloko, iiwebhusayithi ezinophawu kunye nezinye izinto ezikwi-intanethi, ziye ungeniso oluphezulu lwabathengi okanye lokugcwala kwabafundi ngePinterest. Oko kukuthi, ingaphezulu kwenethiwekhi yoluntu, yinjinjini yokukhangela idibanisa abathengi namashishini.
Indlela esebenza ngayo ilula kakhulu: layisha umfanekiso okanye ipini ethi yona ibuye iqhagamshelwe ngekhonkco kwiwebhusayithi yakho. Ngaba ivakala ngathi iqhelekile? Ngokuqinisekileyo ngaphezu kwesihlandlo esinye ugqibe ukufunda inqaku lokuhamba, iresiphi okanye iingcebiso zokuzinceda ngePin.
Njengoko ukukhangela kwiPinterest kukhawuleza kakhulu, ngemizuzwana ipini yakho inokungahoywa ukuba ayitsali kwangoko. Akwanelanga ukuba nomfanekiso omhle kuba ukhuphiswano lukhulu kakhulu. Ke ngoko, ukuba uza kuphakamisa ibhlog yakho okanye uphawu lwakho ngale nethiwekhi kwaye kufuneka yenza imifanekiso, Kuya kufuneka uthathele ingqalelo imiba ethile eya kukunceda ugqame.
3 Umbhalo kunye neefonti
5 Yenza itemplates
Le yeyona nto iphambili ekufuneka uyihloniphile: umzobo wakho kufuneka ube mkhulu kwaye ume nkqo. KwiPinterest, imifanekiso ethe nkqo ithatha indawo eninzi kuba iququzelelwe ziikholamu kwaye ibonakalisa ngcono. Ukuba uzenza isikwere okanye zithe tyaba ziya kujongeka zincinci kakhulu kwaye azizukutsala umdla woluntu.
Ubungakanani kufuneka bube ngaphakathi Umlinganiselo we-2: 3, Kucetyiswa zizikhokelo zenethiwekhi yoluntu efanayo. Ubuncinci besayizi ekufuneka uyile ipini yakho ngama-600 x 900 px, kwaye ungayenza ibe nkulu ngokulandela elo nani. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ukuba ingaphezulu kwe-1200 px ukuphakama, ayinakho ukuboniswa ngokupheleleyo kukutya.
Sicebisa ukuba usebenzise umlinganiso we I-800 x 1200 px.
Nangona uninzi lwemizobo inokuba nesicatshulwa kuphela, iya kuhlala ikhona enomtsalane ngakumbi isikhonkwane esifaka umfanekiso esemgangathweni olungileyo. Ungayisebenzisa ngasemva, uhlala kwisiqingatha yoyilo okanye ngendlela ekusebenzela ngayo. Khangela oko rhoqo inxulumene nesihloko setshathi yakho kwaye oko kuhambelana negama okanye imveliso oyikhuthazayo.
Imvelaphi yomfanekiso womzobo wePinterest. Ice cream popsicle uphawu.
Umbhalo kunye neefonti
Ngenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzithathele ingqalelo. Inkqubo ye- enkulu, efundeka lula kwisicatshulwa esibonisa amehlo Enye yeekhonkco eziphambili zomntu zokuthatha isigqibo sokucofa kwiPin.
El isicatshulwa kufuneka sichaneke, kwaye kukhethwa ukuba ayikude. Kuya kufuneka unike Qonda ngokucacileyo ukuba igrafu imalunga nantoni, Ngale ndlela uya kuba nabalandeli abaninzi abangena kwiwebhusayithi yakho.
Siyacebisa ukuba sebenzisa iifonti ezimbini okanye ezintathu ubuninzi, kwaye udlale ngokudibanisa: ungasebenzisa isibindi esingenasibindi se-calligraphy, okanye iserif ene-calligraphy. Yonke into iya kuxhomekeka kwisitayile sesazisi sakho.
Kwaye kunjalo, ukuba wena umzobo unomahluko olungileyo phakathi kwemvelaphi, imifanekiso, imibala kunye ne-typography, ukuze kungabikho namnye olahlekileyo.
Abantu banxibelelana ngakumbi neempawu esele bezazi. Ke, Imizobo oyilayo kufuneka ilandele isazisi sakho. Sebenzisa imibala ephambili yegama lakho kunye neefonti kulungelelwaniso kunye nomanyano olubonakalayo olulula. Okukhona uluntu lukuqonda, ngakumbi baya kukwenza uphendule kwaye ngaphezulu kuya kungena kwiwebhusayithi yakho.
Into ebonakalayo kodwa ongafanele uyilibale yile Faka ilogo yakho, igama lophawu lwakho okanye i-domain yewebhusayithi yakho Kuzo zonke iitshathi ozenzayo.
I-Pinterest graphic ye-ice cream popsicle brand Melositas
Ukuba usebenzisa yonke le micimbi ikhankanywe apha ngasentla ukwenza umzobo wakho, uya kuba nakho ukukhula ngokulula Uyilo lweetemplate lwegama lakho. Ngetemplate esele yenziwe, konke okufuneka ukwenze kukutshintsha isicatshulwa kunye nokudlala ngemibala.
Xa abantu beqhela ukubona imifanekiso yakho kunye netemplate efanayo, uya konyusa ukwamkelwa kwegama lakho kwaye ubeke indawo engcono.
Ke ngoku uyazi, ukuba ufuna ukufumana abalandeli kunye nabathengi ngePinterest, qala ukwenza imizobo eyenza ifuthe!
Itemplate efanayo isetyenziswe komnye umzobo wePinterest wohlobo lweMelositas ice cream popsicle
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yenza imizobo yePinterest yeBrand yakho ema ngaphandle